Xog: C/kariin Guuleed oo si xun ula dhaqmay qaar kamid ah Musharaxiinta
Monday January 02, 2017 - 13:39:18 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Guuleed oo ku sugan magaalada Muqdisho, ayaa kulamo kala duwan la qaatay tirro Musharaxiin ah.
C/kariin Guuleed iyo Musharaxiinta ayaa kawada hadlay Doorashooyinka Somalia, waxa ayna intaa kadib Musharaxintu siyaabo kala duwan u dalbadeen in Guuleed uu garab kasiiyo Xildhibaanada lagu soo doortay magaalada Cadaado.
Guuleed ayaa Musharaxiinta uga cudur daartay in Xildhibaanada uu ka codsado in Musharax hebel ay codka siiyaan waxa uuna taa bedelkeeda ku wargaliyay inay u furan tahay in ay la kulmaan Xildhibaanada oo ay weydiistaan codadkooda.
Guuleed waxa uu cudur daarkiisa ku sheegay mid aan laheyn u kala eexasho, waxa uuna tilmaamay in Musharax waliba uusan awoodin inuu qanciyo, sidaa darteed ay haboontahay in iyaga ay la tacaamulaan.
C/kariin Guuleed waxa uu sidoo kale sheegay in laga wanaagsan yahay in howlaha Xildhibaanada cusub isaga lagala soo xaajoodo, maadaama xiligaani wixii ka danbeeya ay xoryihiin Xildhibaanada.
Sidoo kale, waxaa Cudur daarka soo dhaweeyay Musharaxiinta oo dhankooda ka sheegay in Xildhibaanada ay ka raadsan doonaa.
Go’aanka C/kariin Guuleed uu isaga fogeeyay dalabka.
Musharaxiinta ayaa imaanaya xili Hogaamiyaha uu wadahadal la galay hal Musharax oo heli doona codadka Xildhibaanada lagu soo doortay Cadaado.